Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee PingLocker
Ku soo dhowow ogeysiiska gaarka ah ee PingLocker Ltdos
Wuxuu dhaqan galay laga bilaabo Maajo 24-keeda, 2018
Qalabkan waxaa maamula PingLocker Ltd. PingLocker Ltd waxay xushmeysaa arimahaaga gaarka ah waxayna ka go'an tahay ilaalinta macluumaadkaaga shaqsiyeed. Ogeysiiskaan qarsoodiga ah wuxuu kugu wargalin doonaa sida aan u ilaalino xogtaada shaqsi marka aad booqato Websaydhka, Appka, ama Adeegyada ( wadar ahaan, “Bixinta PingLocker”), iyadoon loo eegeyn halkaad ka soo booqaneyso, waxayna kuu sheegi doontaa xuquuqahaaga qarsoodiga ah iyo sida sharciga u dhowro.
Waxaad sidoo kale ogolaatay oo aad qiraysaa inaad ku xidhnaan doonto wixii shuruudo iyo shuruudo dheeri ah iyo / ama siyaasad asturnaan ah oo kaqeybgalyada dhismayaasha iyo / ama Iibiyaasha ay soo rogi karaan, taasoo aan PingLocker mas'uul ka ahayn. Xaaladda noocaas ah, waxaa lagu siin doonaa shuruudo iyo shuruudo dheeri ah iyo / ama siyaasad asturnaan waxaana lagaaga baahan doonaa inaad aqbasho iyaga si aad u adeegsato oo aad u isticmaasho Bandhigyada PingLocker.
Adigoo booqanaya Booqashooyinka PingLocker, Martida waxay oggolaaneysaa shuruudaha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Shuruudaha Adeegsiga ee la socda. Isdiiwaangalinta, gelitaanka, iyo / ama adeegsiga Adeegyada, Macaamiil kastaa wuxuu oggolaanayaa shuruudaha Xeerka Asturnaanta. Haddii aadan ku raacsaneyn ama aadan ku qanacsaneyn qayb ka mid ah Nidaamkan, waa inaad isla markiiba joojisaa marin u helka ama adeegsiga Adeegyadeena.
Ogeysiiskaan qarsoodiga ah waxaa lagu bixiyaa qaab qaabeysan si aad u dhagsato meelaha gaarka ah ee hoos ku xusan. Shuruudaha madax-bannaan ee lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay yeelan doonaan macnaha lagu qeexay Shuruudda Adeegga. Fadlan sidoo kale u adeegso Erey bixinta si aad u fahamto macnaha qaar ka mid ah ereyada loo isticmaalay ogeysiiskaan asturan.
1. MACLUUMAAD MUHIIM AH IYO CADAADAN YAHAY
2. MACLUUMAADKA AYAAN KU XIDHAN KU SAABSAN
3. SIDEE AYUU KUU SAARAN YAHAY MACLUUMAADKAAGA QOFKA
4. SIDEE AYAAN U ISTICMAALNAA MACLUUMAADKAAGA QOFKA
5. SHARCIYADA MACLUUMAADKAAGA QOFKA
6. GANACSIYADA DALKA
7. AMARKA AMNIGA
8. XUQUUQDA QAXOOTIGA
9. XUQUUQDAADA SHARCIGA
1. Macluumaad muhiim ah iyo cidda aan nahay
Ujeedada ogeysiiskaan sirta ah
Ogeysiiskaan qarsoodiga ah wuxuu ujeeddadiisu tahay inuu ku siiyo macluumaad ku saabsan sida PingLocker u aruuriso una socodsiiso xogtaada shaqsiyeed adiga oo adeegsanaya websaydhkan, oo ay ku jiraan xog kasta oo aad ku bixin karto websaydhkan markii aad iska qorto joornaalkayaga, iibsashada alaabada ama adeegga ama ka qeybqaadato tartan ama sahan.
Websaydhkan looguma talagelin carruurta mana ogaanayno anagoo aruurinna macluumaadka la xiriira carruurta.
Waa muhiim inaad aqriso ogeysiiskan asturnaanta ah iyo ogeysiiska kale ee asturnaanta ama ogeysiiska socodsiinta cadaaladda ah ee aan ku siin karno munaasabado gaar ah markii aan uruurineynno ama aan ku gudajineyno macluumaadkaaga shakhsiyeed adiga kugu saabsan si aad si buuxda ula socotid sida iyo sababta aan u isticmaaleyno xogtaada . Ogeysiiskaan qarsoodiga ah wuxuu kaabanayaa ogeysiiska kale mana loogu talagalin in laga takhaluso.
Annaga oo ku sugan PingLocker Ltd. ("PingLocker," "annaga," "annaga" ama "our") ayaa ah kantarool oo mas'uul ka ah Bixinta PingLocker.
Waxaan u magacownay sarkaalka ilaalinta macluumaadka (DPO) kaasoo mas'uul ka ah kormeerka su'aalaha la xiriira ogeysiiskan asturnaanta. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan ogeysiiskaan qarsoodiga ah, oo ay kujiraan wax codsiyo ah oo lagu adeegsanayo xuquuqahaaga sharci, fadlan la xiriir DPO adoo adeegsanaya faahfaahinta hoos ku taxan.
Faahfaahinta meesha lagala xiriirayo
Faahfaahinta buuxda waa:
Magaca buuxa ee hay'adda sharciga ah: PingLocker Limited
Cinwaanka: Sarkaalka Ilaalinta Xogta
Cinwaanka emaylka: compliance@pinglocker.com
Cinwaanka boostada: 28 Orchard Road, Lytham St. Annes, Lancashire, FY8 1PF
Waxaad xaq u leedahay inaad cabasho sameyso waqti kasta oo aad u gudbiso Xafiiska Wakiilka Macluumaadka (ICO), maamulka kormeerka Boqortooyada Midowday ee arrimaha ilaalinta macluumaadka (www.ico.org.uk). Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahayn inaan ka mahadnaqno fursadda aan wax uga qabanno welwelkaaga ka hor intaadan u dhowaanin ICO-da markaa fadlan nala soo xiriir marka ugu horreysa.
Isbedelada ogeysiiska sirta ah iyo waajibaadkaaga inaad noo soo sheegto isbedelada
Waxaan sameyn karnaa isbeddelo ama cusboonaysiinta dukumiintigaan waqti ka waqti. Noocyo taariikhi ah oo ogeysiiskan ah waxaa lagu heli karaa adigoo nala soo xiriiraya.
Waa muhiim in xogta shaqsiyeed ee aan kaa heyno ay sax tahay oo ay hadda tahay. Fadlan nala socodsii haddii macluumaadkaaga shakhsiyadeed isbedelo inta aad xiriirka nala leedahay.
Xiriirinta qeybta saddexaad
Bixinta PingLocker waxaa ka mid noqon kara xiriiriyeyaasha websaydhada saddexaad, boggag iyo barnaamijyo. Adoo gujinaya xiriiriyeyaashaas ama u suurageliya xiriiriyaashaas waxay u oggolaan kartaa qolada saddexaad inay soo ururiyaan ama wadaagaan xogtaada. Annagu ma xakameyno websaydhada saddexaad ee xisbiyada mas'uulna kama saarna bayaanka sirta ah. Markii aad ka baxdo degelkeena, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad aqriso ogeysiiska asturnaanta ee degel kasta oo aad booqato.
2. Xogta aan aruurineyno adiga kugu saabsan
Xogta shaqsiyeed, ama macluumaad shaqsiyeed, macneheedu waa macluumaad kasta oo ku saabsan shakhsiga laga soo qaadi karo qofkaas. Kuma jiraan macluumaadka meesha aqoonsiga laga saaray (xog aan la aqoon).
Waxaan ururin karnaa, adeegsan karnaa, keydin karnaa oo aan wareejin karnaa noocyo kala duwan oo macluumaad shaqsiyeed oo adiga kugu saabsan oo aan u soo uruurinay sida soo socota:
Xogta Aqoonsiga waxaa ka mid ah magaca koowaad, magaca gabadha, magaca dambe, magaca isticmaale ama aqoonsi la mid ah, cinwaanka, taariikhda dhalashada iyo jinsiga.
Xogta xidhiidhka waxaa ku jira cinwaanka biilka, cinwaanka gudbinta, cinwaanka emaylka iyo lambarada telefoonka.
Xogta Maaliyadeed waxaa ka mid ah koontada bangiga iyo faahfaahinta kaarka bixinta.
Diiwaangelinta Macaamiilku waxa ku jira faahfaahinta ku saabsan lacag-bixinnada adiga iyo adiga iyo faahfaahinta alaabada iyo adeegyada aad ka soo iibsatay annaga.
Macluumaadka farsamada waxaa ka mid ah cinwaanka borotokoolka internetka (IP), macluumaadkaaga gelitaanka, nooca biraawsarka biraawsarka, nooca aagagga waqtiga iyo goobta, noocyada kumbiyuutarka ee kumbuyuutarrada iyo noocyada, nidaamka hawlgalka iyo aaladaha teknolojiyadda kale ee aaladda aad u isticmaasho si aad uhesho boggaan.
Xogta Xogta waxaa kujira magacaaga iyo eraygaaga sirta ah, iibsashada ama amarada aad adigu sameysay, danahaaga, doorbidyadaada, ra'yi-celintaada iyo jawaabaha sahanka.
Xogta Adeegsiga waxaa ku jira macluumaad ku saabsan sida aad u isticmaasho degelkeena, alaabada iyo adeegyada.
Xogta Suuqgeynta iyo Isgaarsiinta waxaa ku jira dookhyada aad ka heleyso suuqgeynta xaggayaga iyo dhinacyadayada saddexaad iyo waxyaabaha aad doorbideyso isgaarsiinta.
Waxaan sidoo kale ururinaa, isticmaalnaa oo wadaagi karnaa Xogta Isku Dirka ah sida tirakoobka ama xogta tirakoobka ee ujeedo kasta ah. Isku-darka Macluumaadka waxaa laga soo qaadan karaa macluumaadkaaga shaqsiyadeed laakiin looma tixgelin doono xogta shaqsiyeed qaanuunka maadaama xogtan aysan si toos ah ama si aan toos ahayn u muujin doonin aqoonsigaaga. Tusaale ahaan, waxaan soo uruurin karnaa Xogta Adeegsiga si aan u xisaabinno boqolkiiba inta isticmaaleyaasha galaya muuqaal degel oo gaar ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aan isku darno ama aan ku xirno Xogta Isku-Darka macluumaadkaaga shakhsiyeed si ay si toos ah ama si aan toos ahayn kuu aqoonsato, waxaan ula dhaqmeynaa macluumaadka isku-darka sidii xog shaqsiyeed kaas oo loo adeegsan doono si waafaqsan ogaysiiskan qarsoodiga ah.
Ma ururinno Qeybaha S ee bulsho ee Xogtaada Shakhsi ahaaneed ee adiga kugu saabsan (tan waxaa ku jira faahfaahinta ku saabsan jinsiyaddaada ama qowmiyaddaada, diinta ama aaminsanaanta falsafada ah, nolosha galmada, fikirka galmada, fikradaha siyaasadeed, xubin ka ahaanshaha ururka shaqaalaha, macluumaadka ku saabsan caafimaadkaaga iyo xogta hidde-ahaaneed iyo biometric ). Mana uruurinno macluumaad kasta oo ku saabsan xukunnada dambiga iyo dambiyada.
Hadaad ku guuldareysato inaad siiso macluumaad shaqsiyeed
Meesha aan u baahan nahay inaanu soo aruurino macluumaadka shakhsiga ah ee sharciga ah, ama shuruudaha heshiiska aan kula leenahay oo aad ku guuldareysato inaad keento xogtaas markii la codsado, waxaa suuragal ah inaanan fulin karin heshiiska aan hayno ama aan isku dayeyno inaan kula soo galno. (tusaale ahaan, inuu ku siiyo alaab ama adeegyo). Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa inaan joojino badeecad ama adeeg aad annaga nala leedahay laakiin waanu kula soo socodsiin doonnaa haddii ay taasi xaaladdu tahay waqtigaas.
3. Sidee loo ururiyaa macluumaadkaaga shakhsiyeed?
Waxaan u isticmaalnaa habab kala geddisan si aan uga soo aruurinno xogta iyo waxa kugu saabsan oo ay ku jirto iyada oo loo marayo:
Isdhaxgalka tooska ah. Waad na siin kartaa Aqoonsigaaga, Xiriirkaaga iyo Macluumaadkaaga Maaliyadeed adigoo buuxinaya foomam ama annaga nala soo xiriiraya boostada, taleefanka, emaylka, sheekaysiga ama haddii kale. Tan waxaa ku jira xogta shaqsiyadeed ee aad bixiso markii aad:
dalbo ama iibsato alaabadayada ama adeegyadeena;
koonto looga dhex abuuro bartayada internetka;
rukumo adeegeena ama daabacadeena;
codsato suuq geyn in laguu soo diro;
geli tartan, dalacsiin ama sahan; ama
jawaab naga sii
Teknolojiyada otomaatiga ah ama is-dhexgalka . Sida aad ula macaamilayso bartayada internetka, waxaan si otomaatig ah u ururin karnaa Xog Farsamo oo ku saabsan qalabkaaga, talaabooyinka baarista iyo qaababka. Waxaan ururinaa xogtaan shaqsiyadeed anagoo adeegsaneyna cookies, diiwaanka serverka iyo teknoolojiyadda kale ee la midka ah. Waxaa kale oo laga yaabaa inaan helno Xog Farsamo oo adiga kugu saabsan haddii aad booqato degello kale oo ka shaqeynaya cookies.
Macluumaadka aan soo aruurino annagoo adeegsanayno tikniyoolajiyadda "cookie". Kukiyada ayaa ah baakado yar oo xogta ah oo websaydh ku keydiya kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka si kombuyuutarkaagu u “xasuusan doono” macluumaadka booqashadaada. Waxaan u isticmaalnaa cookies-ka inay naga caawiso ururinta Macluumaadka Kale iyo inaan sare u qaadno waayo-aragnimadaada adigoo adeegsanaya Websaydhka.
Waxaan u isticmaali karnaa noocyada soo socda ee buskudyada iyo teknolojiyadda raadraaca:
Kukiyadaha adag ee loo baahan yahay. Kukiyadahan ayaa muhiim ah maxaa yeelay waxay awood kuu siinayaan inaad ku wareegto Adeegyadeena oo aad u isticmaasho waxyaabo astaamo u ah Adeegyadeena. Tusaale ahaan, buskudyada lagama maarmaanka u ah lagama maarmaanka ayaa kuu oggolaanaya inaad gasho meelaha aaminka ah. Haddii aan kaafishan lahayn, Adeegyada qaarkood lama bixin karo.
Kukiyada Waxqabadka / Falanqeynta Kukiyadaani waxay aruuriyaan macluumaadka ku saabsan adeegsigaaga iyo is-dhexgalka Adeegyadayada. Noocyada macluumaadka ay soo ururiyeen buskudyada noocaas ah waxaa ka mid ah bogagga aad inta badan aado, intaad kubixinayso boggaas, ama haddii aad ka hesho farriimo khaldan bogagga qaarkood.
Kukiyada shaqeynaya. Kukiyadaani waxay noo ogolaanayaan inaan xasuusano waxaad door bidday iyo xulashooyinkaaga si aan ugu habboonaano Adeegyadayada adiga iyo danahaaga. Tusaale ahaan, buskudyadan ayaa xusuusan doona wadanka ama luuqada aad dooratay, ama waxay magacaaga soo bandhigi doonaan qaybaha Adeegyada. Haddii aad gasho akaawnkaaga, waxaan kula xiriiri karnaa macluumaadka cookie-ka macluumaadka shakhsiyeed ee ku xira koontadaada.
Xayeysiinta / Suuq-geynta Cookies. Kukiyadaani waxay noo ogolaanayaan inaan kugu keenno suuqgayn ku habboon iyo xayeysiisyo adiga ah. Waxay uruuriyaan macluumaad ku saabsan is-dhexgalkaaga hawlaheenna suuqgeynta (tusaale ahaan, websaydhka ama emayl ahaan) si ay u go'aamiyaan waxa danahaagu yahay iyo waxa aad doorbideyso, iyo sida ugu waxtarka badan ee xayeysiinta noocaas ah ama ololayaasha suuq geynta.
Dhinac saddexaad ama ilo dadweyne oo la heli karo . Waxaan ka heli karnaa macluumaadkaaga kugu saabsan dhinacyo kaladuwan oo kaladuwan iyo ilaha dadweynaha sida hoos ku xusan:
Xogta Farsamada ee dhinacyada soo socda:
a. Falanqaynta Qaybta Saddexaad. Waxaan u adeegsanaa adeegyada falanqaynta dhinac saddexaad (sida Google Analytics oo laga yaabo inuu saldhigoodu yahay mid ka baxsan EU) si loo qiimeeyo isticmaalkaaga Bixinta PingLocker, isu uruurinta warbixinnada ku saabsan waxqabadka, aruurinta xogta tirakoobka bulshada, falanqaynta cabbiridda waxqabadka, iyo ururinta iyo qiimeynta macluumaadka kale ee la xiriira isticmaalka websaydhka iyo internetka. Dhinacyadan seddexaad waxay adeegsadaan cookies iyo teknolojiyad kale si ay uga caawiyaan falanqeynta iyo bixinta macluumaadka. Markii aad gashid isla markaana isticmaashid Websaydhka, waxaad ogolaanaysaa sameynta xogtaada kugu saabsan bixiyeyaashaan falanqeeyayaasha adiga kugu saabsan iyo ujeeddooyinka lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qeybaha seddexaad, ay ku jiraan sida looga baxo xog aruurinta qaar, fadlan booqo boggaga hoose. Fadlan waxaa lagugula talinayaa haddii aad ka baxdo adeeg kasta, ma awoodi doontid inaad isticmaasho waxqabadka buuxa ee Websaydhka.
Google Analytics, fadlan booqo https://www.google.com/analytics
Loogu talagalay Clicky, fadlan booqo https://clicky.com
Wixii ku saabsan kormeerka, fadlan booqo https://www.inspectlet.com/
b. shabakadaha xayeysiinta sida Google oo laga yaabo inay ku salaysnaato meel ka baxsan EU; iyo
c. bixiyeyaasha macluumaadka macluumaadka raadinta sida Google oo laga yaabo inay ku salaysnaato meel ka baxsan EU.
Macluumaadka lala xiriirayo, Macluumaadka Maaliyadeed iyo Macaamil ee laga helo bixiyeyaasha farsamada, bixinta iyo adeegyada gaarsiinta sida Stripe, oo saldhig u ah Midowga Yurub.
Macluumaadka ay soo ururiyeen ama Soo mariyeen Shirkadaha Xayeysiinta Qaybta Saddexaad
Waxaad noo oggolaatay inaan la wadaagno Macluumaadka Kale ee ku saabsan waxqabadkaaga shabakadda iyada oo loo marayo dhinacyada saddexaad ujeeddooyinka daweynta, lafa-guridda, maareynta, soo-warbixinta, iyo tayaynta xayeysiinta aad ku aragto Websaydhka, iyo meelo kale. Dhinacyadan saddexaad waxay isticmaali karaan cookies, calaamadaha pixel (oo sidoo kale loo yaqaanno bekons web ama gif cad), iyo / ama teknolojiyad kale si ay u ururiyaan Macluumaadka kale ujeeddooyinkaas oo kale. Astaamaha 'Pixel tags' ayaa noo suurageliya, iyo kuwan xayeysiiyayaasha saddexaad, in aan garowsanno biraawsarka biraawsarka markii biraawsarku booqdo barta ay ku taal astaanta calaamadda 'pixel tag' si aan u baranno xayeysiiska u keenaya adeegsadaha goobta la siiyay. Waad ka bixi kartaa daalacashada xayeysiinta iyadoo lagu saleynayo macluumaadka aan aruurino. Si aad wax badan uga ogaato adeegsiga macluumaadkan, ama aad doorato inaadan u isticmaalin macluumaadkan adeeg-bixiyeyaashayaga ama iskaashatada xayeysiinta ee saddexaad adoo iska daaya, fadlan booqo Isuduwaha Xayeysiinta Shabakadda adigoo gujinaya http://www.networkadvertising.org/managing /opt_out.asp
4. Sida aan u isticmaalno xogtaada shaqsiyeed
Waxaan u isticmaali doonaa macluumaadkaaga shakhsiga ah marka sharcigu noo oggolaado. Inta badan, waxaan u adeegsan doonnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed xaaladaha soo socda:
Meesha aan u baahanahay inaan fulino heshiiska waxaan ku dhowaa inaan galno ama aan kula galno.
Meesha ay lagama maarmaanka u tahay danahaheena sharciga ah (ama kuwa dhinac saddexaad ah) iyo danahaaga iyo xuquuqahaaga aasaasiga ah kama horimanayaan danahaas.
Halka aan ugu baahanahay inaan u hoggaansanno waajibaadka sharci ama sharci.
Guud ahaan, kuma tiirsanaano ogolaanshaha sida sharciga waafaqsan ee loogu talagalay ka baaraandegida xogtaada shaqsiyeed oo aan aheyn tan la xiriirta u dirista seddexaad ee xiriirka tooska ah ee suuqgeynta tooska ah adiga oo isticmaalaya emayl ama fariin qoraal ah. Waxaad xaq u leedahay inaad kala noqoto ogolaanshahaaga suuq geynta waqti kasta adoo la soo xiriiraya.
Ujeeddooyinka aan u adeegsan doonno xogtaada shaqsiyeed
Waxaan hoos ku soo sheegnay, qaab shaxeed, sharax dhammaan siyaabaha aan u qorsheynayno inaan u isticmaalno xogtaada shaqsiyeed, iyo tan aasaasiga ah ee sharciga ah ee aan ku kalsoon nahay inaan sidaas samayno. Waxaan kaloo cadeynay waxa danahayaga sharciga ah ay ku habboon yihiin meesha ku habboon.
Xusuusnow in aan u hawlgalin karno xogtaada shakhsi wax ka badan hal sharci oo ku saleysan ujeeddada gaarka ah ee aan u adeegsaneyno xogtaada. Fadlan nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay faahfaahin ku saabsan sharciga gaarka ah ee aan ku tiirsannahay inaan ku hawlgalno xogtaada shaqsiyadeed halka in ka badan hal qodob lagu sharaxay jadwalka hoose.
Soo-bandhigyada xayeysiinta ah ee laga helo annaga
Waxaan u isticmaali karnaa Aqoonsigaaga, Xiriirkaaga, Farsamada, Adeegsiga iyo Xogta Xogta si aan u sameysano aragti ku saabsan waxaan u maleyneyno inaad ubaahan karto ama aad ubaahan karto, ama waxa adiga xiiso kuu leh. Sidan ayaa ah sida aan go'aan uga gaarno badeecada, howlaha iyo soo-bandhigyada laga yaabo inay kugu habboonaan karaan (waxaan ugu yeernaa suuqgeynkaan).
Waxaad naga heli doontaa isgaarsiinta suuqgeynta haddii aad naga codsatay macluumaad annaga ama alaabo aad soo iibsatay ama adeegyo aad naga heshay ama haddii aad na siisay faahfaahintaada marka aad tartan gasho ama aad iska diwaangelinayso dalacsiinta, xaalad kasta, aadan ka bixin. helitaanka suuqgeyntaas.
Suuqgeynta qeybta saddexaad
Waxaan heli doonnaa oggolaanshahaaga ku-meel-gaarka ah ka hor intaanan macluumaadkaaga shaqsiyeed la wadaagin shirkad kasta oo ka baxsan PingLocker Ltd ujeeddooyinka suuqgeynta.
Waad waydiin kartaa ama dhinacyada seddexaad inay joojiyaan inay kuu soo diraan farriimaha suuqgeynta waqti kasta adoo galaya websaydhka isla markaana hubinaya ama eegaya sanduuqyada laxiriira si ay ula qabsadaan doorbidkaaga suuqgeynta ama adoo raacaya xiriiriyeyaasha xulashada ka bixinaya farriinta suuq-geynta ee laguu soo diray.
Meeshaad ka baxdo inaad hesho farriimahaan suuq geynta, tani ma quseyn doonto xogta shaqsiyadeed ee naloo siiyay iyadoo ay sabab u tahay alaabada / adeegga la soo iibsaday, diiwaangelinta dammaanadda, waayo-aragnimada badeecada / adeegga, cusboonaysiinta ama macaamillada kale.
Waad dejin kartaa biraawsarkaaga in uu diido dhammaan ama qaar ka mid ah biraawsarka biraawsarka, ama inuu kuu digo marka websaydhyadu dejinayaan ama galaangal u yeelaan cookies. Haddii aad curyaamiso ama diido cookies, fadlan la soco in qaybo ka mid ah websaydhkan laga yaabo inay noqdaan kuwo aan la gaari karin ama aan si sax ah u shaqeynaynin.
Waxaan u isticmaali doonnaa xogtaada shaqsiyeed ujeeddooyinka aan u soo uruurinay, ilaa aan si macquul ah u tixgelinno in aan u baahan nahay in aan u isticmaalno sabab kale oo sababtaasuna ay la jaan qaadi karto ujeeddadii asalka ahayd. Hadaad jeceshahay inaad ka hesho sharaxaad sida howsha ujeedka cusub uu ula jaan qaadayo ujeedada asalka ah, fadlan nala soo xiriir.
Haddii aan u baahan nahay inaan u isticmaalno xogtaada shakhsi ujeeddo aan la xiriirin, waanu kula soo socodsiin doonnaa waxaanan kuu sharixi doonaa saldhig sharciyeed oo noo oggolaanaya inaan sidaas samayno.
Fadlan la soco in aan ka baaraandegi karno xogtaada shaqsiyeed adiga oo aan aqoontaada ama oggolaanshahaaga ahayn, annagoo u hoggaansanna qawaaniinta kore, halkaas oo sharcigu u baahan yahay ama oggol yahay.
5. Bixinta macluumaadkaaga shakhsiyeed
Waxaa suuragal ah inaan la wadaagno xogtaada shakhsiyadeed qeybaha hoos ku qoran ujeeddooyinka ku xusan miiska sadarka 4 ee kore.
Qaybaha Seddexaad ee Dibadda sida ku xusan Qeex-hoosaadka.
Dib-u-milicso iibiyaasha barnaamijyada kombiyuutarka, adeeg-bixiyeyaasha adeegga e-maylka iyo aaladaha warbaahinta bulshada sida Facebook-ga si ay kuugu gudbiyaan waxyaabaha ku habboon websaydhka iyo xayeysiinta adiga iyo cabbiridda ama fahamka waxtarka xayeysiiska aan kuu adeegno
Falanqaynta websaydhka iyo bixiyayaasha khibradaha isticmaalaha sida Google si loo hagaajiyo websaydhkeenna, badeecadaha / adeegyada, suuqgeynta, khibradaha macaamiisha
Iibaystayaasha qalabaynta ee noo oggolaanaya inaanu talo soo jeedinno iyo talooyinno adiga kugu saabsan ka siinno badeecadaha ama adeegyada laga yaabo inay adiga xiiseyn karaan
Qeybaha seddexaad ee aan dooran karno si aan u siino Adeegyadeena iyo socodsiinta Amarada, iibinta, wareejinta, ama mideynta qeybaha ganacsigayaga iyo hantideena. Markii aan horumarinayno ganacsiyadayada, waxaan iibin karnaa, iibsan karnaa ama mideysannaa ganacsiyada ama hantida. Haddii ay dhacdo iibsi shirkadeed, midayn, dib u habeyn, iibin hanti, kala diris, ama dhacdo la mid ah, Macluumaadka waxaa laga yaabaa inuu qeyb ka noqdo hantida la wareejiyay iyo / ama milkiilayaasha cusub waxay u isticmaali karaan macluumaadkaaga shakhsiyadeed isla sida ku xusan. ogeysiiskan sirta ah.
Waxaan u baahannahay dhamaan qeybaha sedexaad inay xushmeeyaan amniga xogtaada shaqsi ayna ula dhaqmaan si sharciga waafaqsan. Uma oggolaanayno bixiyeyaashayada adeegga saddexaad inay u isticmaalaan macluumaadkaaga gaarka ah ujeeddooyinkooda oo u oggolaadaan oo keliya iyaga inay u hawlgalaan macluumaadkaaga gaarka ah ulajeeddooyin cayiman iyo iyadoo la raacayo tilmaamahayaga.
6. Xawaaladaha caalamiga ah
Macluumaadkaaga shaqsi kuma wareejin doono meel ka baxsan Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA). Haddii aan go'aansanno inaan xogtaada shakhsiga ah uga wareejino EEA mustaqbalka sabab kasta ha noqotee, waxaan hubin doonnaa in ilaalin la mid ah la siiyo iyada oo aan hubinayno ugu yaraan mid ka mid ah xeerarka soo socda in la hirgaliyo:
Kaliya waxaan u gudbin doonnaa xogtaada shakhsiyadeed dalal loo arko inay bixiyaan ilaa heer ku filan ilaalinta macluumaadka shaqsiga ah ee Guddiga Yurub. Faahfaahin dheeri ah, ka eeg Guddiga Yurub: Ku-habboonaanta ilaalinta macluumaadka shakhsiyadeed ee wadamada aan EU ahayn
Meesha aan u adeegsanno bixiyeyaasha adeegga qaarkood, waxaan u adeegsan karnaa qandaraasyo gaar ah oo ay oggolaadeen Guddiga Yurub oo siiya xogta shaqsiyeed isla ilaalinta ay ka leeyihiin Yurub. Faahfaahin dheeri ah, ka eeg Komishanka Yurub: Moodellada qandaraasyada ah ee wareejinta macluumaadka shaqsiyadeed loogu dirayo wadamada saddexaad.
Meesha aan u adeegsanno bixiyeyaasha ku saleysan Mareykanka, waxaan u gudbin karnaa xog iyaga haddii ay qeyb ka yihiin Asturnaanta Gaarka ah ee u baahan iyaga inay bixiyaan ilaalin la mid ah xogta shaqsiyeed ee ay wadaagaan Yurub iyo Mareykanka. Faahfaahin dheeri ah, ka eeg Guddiga Yurub: EU-US Shield Shield.
7. Amniga xogta
Waxaan diyaarinay talaabooyin amniga ku habboon si looga hortago in macluumaadkaaga shaqsiyeed si shil ah loogu lumiyo, loo istcimaalo ama loo adeegsado qaab aan sharci ahayn, wax laga beddelo ama loo shaaciyo. Intaas waxaa sii dheer, waxaan u xadideynaa helitaanka macluumaadkaaga shaqsiyaadkaas shaqaalaha, wakiillada, qandaraasleyaasha iyo qeybaha kale ee saddexaad ee leh meheradda ay u baahan yihiin inay ogaadaan. Kaliya waxay ka baaraandegi doonaan xogtaada shakhsiyeed tilmaamahayaga waxayna ku waajibayaan waajibka xog qarinta.
Waxaan diyaarinay habraacyo aan kula macaamilayno wixii ku saabsan jebinta macluumaadka shaqsiyeed ee la tuhunsan yahay waxaanna ku ogeysiin doonnaa adiga iyo qaanuun kasta oo quseeya ku xad gudubka halkaas oo sharci ahaan nalooga baahan yahay inaan sidaas sameyno.
Waxaad sidoo kale mas'uul ka tahay amniga macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waa inaad doorataa eraygaaga sirta ah oo dherer kugu filan iyo kakanaantaba markaad adeegsaneyso Adeegyadeena oo aad sirtaada sirta ah u xafido. Haddii aad u malaynayso inuu jiro rukhsad aan loo marin ama isticmaalin akaawnkaaga, fadlan si deg deg ah noola soo xiriir halkan compliance@pinglocker.com.
8. Xog haynta
Mudo intee leeg ayaad u isticmaali doontaa xogtayda shaqsiyadeed?
Waxaan hayn doonnaa xogtaada shakhsiyadeed ilaa iyo inta lagama maarmaanka u ah fulinta ujeedooyinka aan u soo aruurinay, oo ay kujirto ujeeddooyinka lagu qanco wixii sharci ah, xisaabinta, ama shuruudaha warbixinta.
Si loo go'aamiyo muddada haynta ku habboon ee macluumaadka shaqsiga, waxaan tixgelinaynaa xaddiga, nooca, iyo xasaasiga macluumaadka shaqsiga ah, halista suurtagalka ah ee waxyeellada leh isticmaalka aan la fasaxin ama bixinta macluumaadkaaga shakhsiyeed, ujeeddooyinka aan u socodsiinno xogtaada shaqsiyeed iyo haddii waxaan ku gaari karnaa ujeedooyinkaas qaabab kale, iyo shuruudaha sharciga ee lagu dabaqi karo.
Xaaladaha qaarkood waxaan u qarsoodi karnaa macluumaadkaaga shaqsiyeed (si aysan dib dambe ula xiriirin doonin) cilmi baaris ama ujeedo tirakoob taas oo aan u isticmaali karno macluumaadkan si aan xad lahayn iyadoo aan ogeysiis dambe lagaa siinin.
9. Xuquuqdaada sharciyeed
Duruufaha qaarkood, waxaad leedahay xuquuqaha hoos imanaya sharciyada ilaalinta macluumaadka ee la xiriira macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Codso marin u hel xogtaada shaqsiyeed.
Codso sixitaan xogtaada shaqsiyeed.
Codso ciribtirka xogtaada shaqsiyeed.
U diido habeynta macluumaadkaaga shaqsiyadeed.
Codso xaddiditaanka ka baaraandegga xogtaada shaqsiyeed.
Codso wareejinta macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Xuquuqda ka laabashada ogolaanshaha
Hadaad rabto inaad isticmaasho mid ka mid ah xuquuqaha kor lagu soo sheegay, fadlan nagala soo xiriir compliance@pinglocker.com
Lacag inta badan looma baahna
Khasab kuguma aha inaad bixiso khidmad si aad u gasho xogtaada shaqsi (ama aad u isticmaasho mid ka mid ah xuquuqaha kale). Si kastaba ha noqotee, waxaan kugu soo dallaci karnaa ujro macquul ah haddii dalabkaagu uu yahay mid aan sal iyo raad lahayn, celcelis ama xad-dhaaf ah. Bedel ahaan, waxaan diidi karnaa inaan u hogaansano dalabkaaga xaaladahaan oo kale.
Waxa laga yaabaa inaan kaaga baahanno adiga
Waxaan u baahan karnaa inaan kaa codsanno macluumaad gaar ah adiga kaa caawinta xaqiijinta aqoonsigaaga oo aan hubinno xuquuqda aad u leedahay helitaanka macluumaadkaaga shakhsiyeed (ama inaan ku isticmaalno mid ka mid ah xuquuqahaaga kale). Kani waa tallaabo amni oo lagu hubinayo in macluumaadka shakhsiga ah aan loo siinin qof kasta oo aan xaq u lahayn inuu helo. Waxaan sidoo kale kula soo xiriiri karnaa si aan ku weydiisanno macluumaad dheeri ah oo la xiriira dalabkaaga si aan u dardargelinno jawaabteenna.
Waqtiga xaddidan si looga jawaabo
Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan codsiyada sharciga ah hal bil gudaheed. Mararka qaarkood waxay qaadan kartaa wax ka badan hal bil haddii dalabkaagu gaar ahaan adag yahay ama aad codsatay tiro codsiyo ah. Xaaladdan oo kale, waanu kula soo socodsiin doonna waan kula socodsiin doonnaa.
10. Qaamuus qaamuus
Xiisaha Sharciyeed micnaheedu waa danta ganacsigeenna sidii aan u fulin lahayn una maareyn lahayn ganacsigeenna si ay noogu suurtogeliso inaan ku siino adeegga / wax soo saarka ugu fiican iyo khibradda ugu wanaagsan uguna kalsoonida badan. Waxaan hubineynaa inaan tixgalineyno oo aan isku dheelitirno wixii saameyn ah ee kugu dhaca adiga (labadaba mid wanaagsan iyo mid xunba) iyo xuquuqahaaga ka hor intaanan u hawlgelin macluumaadkaaga shakhsiyeed danaha sharciyeed. Uma adeegsano macluumaadkaaga shaqsiyadeed waxqabadyada halka danaheenna looga leexiyay saameynta aad ku yeelatid (ilaa aan oggolaanshahaaga haysanno ama haddii kale uu sharcigu na farayo ama uu oggolaado mooyee). Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida aan u qiimeyno danahaheena sharciga ah ee ka hor imaan kara saameyn kasta oo kugu dhici karta marka la eego howlaha gaarka ah adoo nala soo xiriiraya.
Waxqabadka Qandaraasluhu macnaheedu waa ka baaraandegga xogtaada halka ay lagama maarmaanka u tahay fulinta qandaraaska aad qayb ka tahay ama aad tillaabooyin u qaadatid codsigaaga ka hor intaadan gelin heshiiska noocaas ah.
U hoggaansanaanta waajibaadka sharci ama sharci ayaa ka dhigan ka baaraandegidda xogtaada shaqsiyeed halkaas oo ay lagama maarmaan u tahay u hoggaansanaanta waajibaadka sharci ama sharci ee aan annagu ku qasbanahay.
Qeybaha Saddexaad ee Gudaha
Shirkadaha kale, sida lammaaneheenna softiweerka, Blackbell Inc, oo u shaqeynaya sidii maamuleyaal isku dhaf ah ama soo-saareyaal kuwaas oo ku saleysan EU dhexdeeda oo bixiya adeegyo IT iyo nidaam maamul iyo waxay bilaabaan soo gudbinta warbixinta hogaaminta.
Qaybaha Saddexaad ee Dibadda
Bixiyeyaasha adeegga ee u shaqeeya sida ku-hawlgalayaal ku saleysan EU dhexdeeda oo bixiya alaabada, adeegyada, IT iyo adeegyada maamulka nidaamka.
La-taliyayaal xirfad-yaqaan ah oo u-hawl-galaya sida la-hawlgalayaal ama ilaaliyayaal wada-jir ah oo ay ku jiraan qareenno, bankiyo, hanti-dhawr iyo kormeerayaal ku saleysan EU dhexdeeda oo bixiya la-talin, bangi, sharci, caymis iyo adeegyada xisaabinta.
HM Dakhliga & Kastamyada, nidaamiyaasha iyo maamulada kale ee kusalaysan Aaga Dhaqaalaha Yurub ee ubaahan soo gudbinta howlaha howlaha socda duruufaha qaar.
Hay'adaha cilmi baarista suuqyada, liiska dillaaliyeyaasha, hay'adaha ka hortagga khayaanada.
Waxaad xaq u leedahay inaad:
Codso marin u hel macluumaadkaaga shaqsiyeed (oo sida caadiga ah loo yaqaan “codsi marin helis mawduuc xog”). Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho koobiga macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa hayno iyo inaad hubiso inaan si sharci ah u wadno.
Codso sixitaan xogta shaqsiyeed ee aan adiga kaa hayno. Tani waxay awood kuu siineysaa inaad hesho wax xog ah oo aan dhameystirneyn ama aan sax aheyn oo aan kaa hayno oo adiga lagaa sixi doono, in kastoo aan u baahanahay inaan xaqiijinno sax ahaanta xogta cusub ee aad na siiso.
Codso ciribtirka xogtaada shaqsiyeed. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad na weydiiso inaan tirtirno ama aan ka saarno xogta shaqsiyeed halkaas oo aaney jirin sabab fiican oo aan ugu sii wadno sii wadashada. Waxa kale oo aad xaq u leedahay inaad na weydiisato inaanu tirtirno ama tirtirno xogtaada shaqsiyeed halkaas oo aad si guul leh u isticmaashay xaquuqda aad u leedahay diidmada howshaada (hoos ka eeg), halkaasoo laga yaabo inaan u si aan sharci ahayn u socodsiinay macluumaadkaaga ama meeshii nalooga baahnaa inaan tirtirno xogtaada shaqsiyeed u hogaansanaato sharciga deegaanka. Ogsoonow, si kastaba ha noqotee, in aannu had iyo jeer u awoodi doonin inaanu u hoggaansanaano dalabkaaga ciribtirka sababao sharciyeed oo gaar ah oo lagaa soo sheegi doono, haddii lagu dabaqi karo, waqtiga codsigaaga.
Ujeeddadeedu maareynta macluumaadkaaga shaqsiyeed halkaas oo aan ugu tiirineyno dano sharci ah (ama kuwa dhinac saddexaad ah) oo waxaa jira wax ku saabsan xaaladdaada qaaska ah taasoo kugu kalifaysa inaad diiddo inaad ka shaqeyso arrimahaas maadaama aad dareensan tahay inay saameyn ku leedahay aasaasigaaga. xuquuqda iyo xorriyadda. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad diiddo halka aan ka wadno macluumaadkaaga shakhsiyeed ujeeddooyinka suuqgeynta tooska ah. Mararka qaarkooda, waxaan muujin karnaa inaan haysanno sabab sharciyeed oo aan ku hawl galno macluumaadkaaga kaasoo xad-gudbaya xuquuqdaada iyo xorriyaddaada.
Codso xaddiditaanka ka baaraandegidda xogtaada shaqsiyeed. Tani waxay awood kuu siineysaa inaad naga codsato inaan joojino socodsiinta macluumaadkaaga shaqsiyeed xaaladaha soosocda: (a) hadaad rabto inaad noo cadeyso saxsanaanta xogta; (b) halka adeegsiga xogteena ay sharci darro tahay laakiin aadan dooneynin inaan tirtirno; (c) meesha aad nooga baahan tahay in aan hayno macluumaadka xitaa haddii aan dib dambe ugu baahnayn sida aad ugu baahan tahay in la aasaaso, lagu dhaqmo ama lagu difaaco sheegashooyinka sharciga ah; ama (d) aad diiddeen adeegsiga xogtaada laakiin waxaan u baahan nahay inaan hubinno inaan haysanno waxyaabo sharciyeysan oo loo isticmaali karo.
Codso wareejinta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed adiga ama qof saddexaad. Waxaan ku siin doonaa adiga, ama dhinac saddexaad oo aad dooratay, macluumaadkaaga shakhsiyeed qaab, qaab caadi ah loo adeegsado, qaab mashiin lagu akhrin karo. Xusuusnow in xuquuqani ay quseyso oo keliya macluumaadka otomatiga ah oo aad markii hore noo siisay oggolaansho aan ku isticmaalno ama halka aan u isticmaalnay macluumaadka si aan kulaula galno heshiis.
Dib ula noqo oggolaanshaha waqti kasta oo aan ku tiirsanaano oggolaanshaha lagu socodsiinayo xogtaada shaqsiyeed. Si kastaba ha noqotee, kani wax saameyn ah kuma yeelan doono sharci ahaanshaha wixii howsha la qabtay ka hor inta aadan ka noqon oggolaanshahaaga. Haddii aad la noqoto ogolaanshahaaga, waxaa suuragal ah inaanu ku siin karin alaabooyin ama adeegyo kuu gaar ah. Waxaan kugula talin doonnaa haddii ay taasi dhacdo waqtiga la noqoshada oggolaanshahaaga.